Birmania, toerana mahafinaritra ary tsy araraotin'ny fizahantany | Fitsangatsanganana tanteraka
Burma dia ao amin'ny Azia atsimo atsinanana, manamorona ny sisintany, amin'ireo firenena hafa miaraka amin'ny Shina e India, ireo goavambe roa ao amin'ilay faritra. Na izany aza, Myanmar, araka ny fantatra ihany koa, tsy kely izy io, satria efa ho fito hetsy kilometatra toradroa ny velarany.
Amin'ny faritra midadasika toy izany dia manana zavatra maro ho hitanao ianao. Misy tanàna lehibe ho renivohitra, Yangon, fa koa tanàna kely toa nijanona ara-potoana. Toy izany koa tempoly lehibe, fa miaraka amin'ny faritra mahafinaritra sy lalana eny an-tendrombohitra. Ankoatr'izay dia tany misy fitaomana mahery bodista izay nosokafana ho an'ny fizahantany tsy ela akory izay. Raha te hahafantatra bebe kokoa momba an'i Birmania ianao dia mamporisika anao hanohy hamaky.
1 Inona no ho hita any Birmania
1.1 Rangoon, renivohitry ny firenena teo aloha
1.2 Naipyidó, ilay tanàna matoatoa
1.3 Bagan, tanànan'ny tempoly any Birmania
1.4 Mandalay, fahagagana Birmana iray hafa
1.5 Hsipaw, fitsidihana hafa
1.6 Alan'ny Kakku Stupa
1.7 Inle Lake, toerana mahagaga any Birmania
1.8 Tendrombohitra Popa sy ny monasiterany
1.9 Ny morontsirak'i Ngapali, Birmania tsy dia fantatra loatra
2 Rahoviana no tsara kokoa ny mandeha any amin'ny firenena Aziatika
3 Inona no hohanina any Birmania
4 Ahoana no ahatongavana any Birmania
Inona no ho hita any Birmania
Raha araka izay vao nolazainay taminao, dia diamondra i Myanmar raha ny fahitana azy io. Vao tsy ela akory izay no niditra tao amin'ny faritra manodidina an'i Azia atsimo atsinanana ary ny zava-mahatalanjona sy mampiavaka azy dia mbola tsy mandray olona an-tapitrisany isan-taona. Na izany na tsy izany dia hasehonay anao ny sasany amin'ny tsara indrindra.
Rangoon, renivohitry ny firenena teo aloha
Ity tanàna be mponina misy olona maherin'ny dimy tapitrisa ity no renivohitr'i Birmania hatramin'ny taona 2005 ary mbola io no teboka lehibe idiran'ny firenena. Na izany aza, tsy tanàna tsara tarehy indrindra izy io, farafaharatsiny raha ampitahaina amin'ny hafa isika.
Na ahoana na ahoana, dia misy zavatra tsy maintsy tsidihinao. Izany no tranga misy eo amin'ny antokom-pivavahana Shwedagon, izay miavaka ilay pagoda manana anarana mitovy amin'izany. Izy io dia stupa mahatalanjona (any Birmania no iantsoana azy ireo hatsikana) metatra zato ny haavony ary nandro volamena. Na dia manome 2500 taona azy aza ny angano, dia namboarin'ny manampahaizana izany teo anelanelan'ny taonjato faha-XNUMX sy faha-XNUMX tamin'ny androntsika. Raha ny fahitana ny Bodisma dia io no zava-dehibe indrindra ao amin'ny firenena, satria manana ny relìka ho azy Buddha.
Tsy io ihany no stupa hitanao ao Rangoon. Manoro hevitra anao koa izahay hitsidika ny Sule pagoda, octagonal amin'ny endriny ary koa dome volamena mitovy, na ny Pagoda Chaukhtatgyi, izay manana endrika bodista goavambe, toy ny mitranga ao amin'ny paya Ngahtatgyi.
Naipyidó, ilay tanàna matoatoa
Raha ny renivohitra fitantanana avy any Birmania nanomboka ny taona 2005, tsy ampidirinay eto ho toy ny tolo-kevitra izany, fa satria te hahafanta-javatra. Namboarina tamina ala ambanivohitra izy io ary voalaza fa mandrakotra enina heny noho ny tany New York. Na izany aza, dia vahoaka kely dia kely. Raha ny marina dia tsy fantatra ny isan'ny mponina, na dia tombanana ho iray tapitrisa aza izy io, izay tsy inona na inona ho an'ny toerana midadasika toy izany. Tsy manoro hevitra anao izahay hitsidika azy io, fa raha manao izany ianao dia aza hadino ny mahita ireo stupa Buddhist goavambe Uppatasanti.
Bagan, tanànan'ny tempoly any Birmania
Any amin'ny lemaka lehibe amin'ny firenena, eo amoron'ny Rano Irrawaddy, dia nambara vao tsy ela akory izay Lova eran-tany ho an'ireo tempoliny mahafinaritra. Voalaza fa misy efatra arivo, fa ny iray tokony hamanginao amin'ny fomba tena ilaina dia ny an'ny Ananda, tamin'ny taonjato fahiraika ambin'ny folo ary nantsoina "Abbey Westminster Burmese" noho ny fahalehibiazany; Sulamania, avy amin'ny XII ary ny dikany dia midika hoe "Jewel in the Crown"; Dhammayangyi, tsy hay hadinoina noho ny lokony volontany amin'ny faritra iray izay saika volamena daholo izy ireo, ary Shwezigon, voahodidin'ny clown efatra izay samy manana ny sarin'i Buddha.
Mandalay, fahagagana Birmana iray hafa
Fitsidihana iray hafa tena ilaina amin'ny dianao any Burma ny tanànan'i Mandalay, izay ny anarany mampihetsi-po dia topi-maso amin'ny zavatra rehetra hitanao ao. Hanombohana, very amin'ny lalana tery amin'ny tanànany taloha, feno tabataba sy bara.
Fa ambonin'izany rehetra izany, tsidiho ilay sarobidy Lapan'i Mandalay, toerana nonenan'ny mpanjaka farany teo amin'ny firenena. Ao anatin'ny trano mimanda no misy azy ary naorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX. Izy io dia misy tranobe maromaro misy tafontrano mifanindry ary, amin'ny alàlan'ny anekotista, holazainay aminao fa ny isan'izy ireo izay samy manana ny lanjany ny fananganana tsirairay.
Tokony ho hitanao any Mandalay koa ilay mahavariana Tempolin'i Mahamuni, izay manana endrika bodista tsy dia ambany noho izany. Manohy ny angano sy ny anecdotes, holazainay aminao fa heverina ho ilay izy kopia marina ihany izany no izy eto amin'izao tontolo izao.
Ary farany, raha hitanao fa afaka miakatra ireo dingana 1700 dia mankanesa any Havoanan'i Mandalay, avy amin'izany ianao dia hahazo fomba fijery mahavariana momba ny tanàna.
Hsipaw, fitsidihana hafa
Avy any Mandalay mihitsy ny Fitsangatsanganana an-dalamby mahatalanjona indrindra ao Myanmar, tsy mety afa-tsy amin'ny mpitsangatsangana. Tonga hatrany amin'ny tanànan'ny Faratsiho, saingy misongadina amin'ny endrika mampiavaka azy ary, ambonin'izany rehetra izany, ho an'ny Gokteik viaduct, firafitra vy marefo efa ho fitonjato metatra miala amin'ny tany.
Mijanona ao amin'ny tanànan'ny Ambilobe, izay manolotra anao fitsidihana hafa any Birmania ivelan'ny faritry ny fizahan-tany. Ao amin'ity tanàna ity dia ho hitanao ny fiainana andavanandron'ny mponina ao amin'ny firenena Aziatika ary afaka mitsidika an'i Little Bagan, ilay Lapan'i Shan ary ny moske silamo. Fa ambonin'izany rehetra izany, miakara any amin'ny Havoan'ny Buddha dimy, avy amin'izany no hankasitrahanao ny filentehan'ny masoandro mahavariana.
Alan'ny Kakku Stupa
Araka ny hitanao, ny Birmania rehetra dia feno tempoly sy stupas. Fa raha te hahita toerana tsy manam-paharoa ao amin'ny firenena Aziatika ianao dia tsidiho ny ala stupa an'ny Kaku. Dia an-tongotra goavam-be ataon'ny mpitsikilo kely miisa 2500, izay samy manana ny endriny Buddha, izay hahagaga anao.
Inle Lake, toerana mahagaga any Birmania
Any amin'ny shan tendrombohitra Amin'ny haavo XNUMX metatra eo ho eo, majika ny fitetezana ity farihy ity. Hanombohana azy dia mitovy amin'ny renirano iray, izay XNUMX kilometatra ny halavany, dimy monja ny sakany. Fa, ho fanampin'izay, eo amorony misy vohitra roanjato ny mponina, ny Inta (o "Zanakalahin'ny farihy"), tazomy daholo ny firavaka Burmese nentim-paharazana.
Tendrombohitra Popa sy ny monasiterany
Toerana iray hafa nofonosina miafina Tendrombohitra Popa io. Ampy izay ny fahitanao azy, manirery eny amin'ny lemaka, mba hahafantaranao ny tianay holazaina. Ankoatr'izay, eo an-tampony no misy ny tsara tarehy monasiteran'ny taung kalat, izay toa napetraka tamin'ny majika teo.
Raha miakatra amin'ny tampony dia tsy maintsy miakatra 777 ianao. Nefa mitandrema amin'ny zavatra entinao satria tsy misy farany Monkeys Izy ireo dia miambina ny monasitera ary hisambotra azy ireo amin'ny kely tsy fitandremana anananao.
Ny morontsirak'i Ngapali, Birmania tsy dia fantatra loatra
Raha ny lojika, ao amin'ny firenena ny haben'ny Birmania dia tsy maintsy misy torapasika tsara tarehy toa izany ihany. Amin'ny anao dia any amin'ny faritry ny Ngapali. Manomboka hararaotin'ny fizahan-tany izy ireo, saingy mitazona rivotra virjina sasany ihany. Ny fankafizanao azy ireo dia hahafahanao miala sasatra aorian'ny fitsidihana be dia be.
Rahoviana no tsara kokoa ny mandeha any amin'ny firenena Aziatika
Burma dia manana karazana toetr'andro. Saingy, amin'ny ankapobeny, manjaka amin'ny Azia atsimo atsinanana. Izany hoe, afaka mahita ny tenanao ianao vanim-potoana roa: ny lena sy ny maina. Ny voalohany, ankoatry ny orana, dia ny vanim-potoanan'ny rotsakorana ary mafana be ny hafanana ka tsy tokony hatoroinay izany.
Tsara kokoa raha mitsidika ny firenena ianao amin'ny main-tany, manokana eo anelanelan'ny Desambra sy Martsa. Na izany aza, ny voalohany amin'ireo volana ireo dia mifanojo amin'ny vanim-potoana avo, izay lafo kokoa ny vidiny. Noho ireo antony rehetra ireo dia manoro hevitra anao izahay handeha any Birmania eo anelanelan'ny volana Janoary sy Martsa.
Inona no hohanina any Birmania
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hahalalana firenena iray dia ny fanandramana ny gastronomiya. Farafaharatsiny tsy feno ny fitsidihana raha tsy manandrana ianao. Ny nahandro Birmana dia misy fiantraikany lehibe amin'ny an'ny mpifanila trano aminy Shina, India y Tailandia. Vokatr'izany, ny vary Izy io dia singa fototra iray ao anaty loviany ary miavaka koa ireo akora manta Trondro Ranomasina Andaman.
Raha ny voalohany dia manomana a varimbazaha na aseho ho toy ny mason-tsivana mifangaro izay isan-karazany nga shaykh entina hisakafo maraina io. Toy izany koa paty o paty singa ilaina izy ireo.
Mikasika ny lovia mahazatra, ny lasopy, antsoina hingyo, na dia antsoina aza ireo asidra chiyei. Ho an'ny ampahany, ngapi Izy ireo dia amboaram-borona masirasira izay nohanina miaraka amin'ny legioma sy ny vary; ny lephet thok dia salady ravina dite, izay misy laisoa sy voanjo ihany koa, ary ny hto-hpu nwe Izy io dia misy lafarinina lafarinin-trondro miaraka amina henan-kisoa na akoho ary miharo paprika sy anana manitra.
Saingy ny lovia nasionalin'ny Birmania dia mohinga, paty vary sasany ampiarahina amin'ny ron-trondro sy tongolo. Azonao atao koa ny mandray akora hafa toy ny legioma, atody nandrahoina, lentilasy nendasina ary na dia trondro akondro mangatsiaka aza.
Fa azonao atao koa ny manandrana ny kariera burmese, izay miaraka amin'ny saika ny zava-drehetra, na dia misy vary, legioma, anana, tofu ary saosy hatrany aza ngapi ianao. Ary farany, ny nan gyi thoke Manana paty nendasina lehibe misy akoho, trondro voadidy, atody nandrahoina ary tsimoka tsaramaso.
Mba hamaranana ny sakafo mahazatra anao dia manana vatomamy ao Birmania koa ianao. Raha ny marina dia raiso ny dite misy mofomamy Fomban-drazana iray manontolo amin'ny mponina ao amin'ny firenena izany. Ny malaza indrindra dia ny tendrombohitra, karazana bun mamy miaraka amin'ny voaloboka sy voanio, ary ny bein moun (heverinay fa tendrombohitra midika zavatra toa ny mofomamy), izay mofomamy malefaka sy mamy.
Na izany aza, raha maniry voankazo ianao dia manana sasany izay tsy ho hitanao any Espana. Ohatra, izy Durian. Saingy tsy maintsy mampitandrina anao izahay fa tsy mahafinaritra ny fofony. Raha ny marina dia misy ireo niantso azy "Ny voankazo maimbo indrindra eto an-tany". Na izany aza, raha vao resinao izany fiantraikany izany dia manana tsiro hafakely ny henan'izy ireo.
Raha zava-pisotro no resahina, ny dite amin'ny karazany hafa dia ny an'ny firenena izy. Fa ny Burmese koa dia mandany be Cerveza ary na dia noho. Ny ankamaroan'ny vazimba teratany dia ilay Tuba, zava-pisotro misy alikaola izay azo avy amin'ny voanio.
Ahoana no ahatongavana any Birmania
Ny fomba tsara indrindra hidirana amin'ny firenena Azia dia amin'ny alàlan'ny Seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Yangon. Anan'izy ireo koa izany Soavinandriana y Naypyidaw, fa ny sidina avy any ivelany dia tsy fahita firy.
Indray mandeha any Birmania, hifindra eo anelanelan'ny tanàna, ny tsara indrindra dia ny andalana fiara fitateram-bahoaka. Azonao atao ny mahita azy ireo amin'ny karazan-karazany rehetra, manomboka amin'ny fiara maoderina misy fifehezana ny rivotra ka hatrany amin'ireo fiara kely misy mpandeha telo-polo eo ho eo. Azonao atao ihany koa ny manao izany manofa fiara miaraka amin'ny mpamily, saingy tsy mora izany. Ary koa, fomba iray hafa hivezivezena ny fampiasana ny sambo izay mamakivaky ny reniranon'ny firenena.
Ary farany, hitsidihana ireo tanàna lehibe dia manana koa ianao fiara fitateram-bahoaka. Fa ny mahazatra kokoa dia ny posiposy, malaza be eto amin'ity faritra Azia ity. Ny tena izy dia ny sidecar ary ny ianao bein, misy kodiarana telo ary mitovy amin'ny tuk-tuk de Tailandia. Na izany aza, ny fitaovam-pitaterana an-tanàn-dehibe izay tiana indrindra dia ny ny bisikileta. Amin'ny tanàna lehibe rehetra dia hahita teboka fanofana ho azy ireo ianao.
Ho famaranana, firenena tsara tarehy mbola tsy nohararaotin'ireo mpiasan'ny fizahan-tany lehibe i Burma. Na izany aza, efa miova izany satria manolotra anao tempoly mahafinaritra y toetra mampientanentana sy mahavariana. Sahy mahalala ny firenena aziatika ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Madagascar
Inona no ho hita any amin'ny nosy Canary